‘हप्तामा कतिपटक यौ #न स म्पर्क गर्ने ? यस्तो छ सही तरिका ! – Sudur Samaj
यौ ‘न स’म्पर्क खा’सगरी वि’वाहित द’म्पतीको दिनचर्याकै एउटा हि’स्सा हो । नव–दम्पतीबीच रातमा कति पटक यौन सम्पर्क स्थापित हुन्छ । जब उमेर ढल्कदै जान्छ वा बैवाहिक जीवन लम्बिदै जान्छ, यौ’न सम्र्कको दर पनि क्रमस घट्दै जान्छ । थुप्रै दम्पतीबीच यौ’न सक्रियतामा असन्तुलन हुनेगर्छ ।
कतिले आफ्नो पार्टनर यौनमा उदासिन भएको बताइरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी कतिले आफ्ना पार्टनर यौनमा बढी नै सक्रिय हुने गुनासो गर्छन् । जबकी यौन सम्पर्कमा दुबैको रुची, उत्सुकता र सक्रियता समान हुनुपर्छ । यदि त्यसो भयो भने यौन जीवन सुखमय हुन्छ।अक्सर दम्पतीको यौन सम्बन्धमा तालमेल मिलिरहेको हुँदैन । यहि कारणले उनीहरुको सम्बन्धमा खटपट आउँछ । मनमुटव हुनेगर्छ ।
कतिपय अवस्थामा त डिभोर्स पनि हुने गर्छ । जब पार्टनरबाट यौ’न सन्तुष्टि मिल्दै उनीहरुले अर्कैतिर त्यसको विकल्प खोज्न थाल्छन् । पति वा पत्नी दुबैको हकमा यस्तो हुनसक्छ । त्यसैले यौन सम्बन्धमा दुबै पति पत्नी सक्रिय हुनुपर्छ । तर, यौनमा अधिक रुची हुनु पनि राम्रो मानिदैन । साथै यौनमा उदासिन भएको पनि राम्रो मानिदैन ।
दम्पतीको सम्बन्ध सुमधुर राख्नका लागि यौन जीवनमा सन्तुष्ट चाहिन्छ । यौन जीवन सुखमय भयो भने उनीहरु एकअर्कामा थप नजिक हुनपुग्ने विभिन्न अध्ययनहरुमा पाइएको छ । यसको शारीरिक फाइदा पनि छ । भनिन्छ, यौन सम्पर्कको क्रममा शरीरको रक्तप्रवाह राम्ररी हुन पाउँछ । यसले मुटुलाई स्वस्थ्य राख्नदेखि छालामा चमक ल्याउनसम्म सहयोग गर्छ ।
परस्त्री संगको प्रेम- हामी दुबै एकअर्काको अंगालोमा निशब्द हुन्छौ’